Uru nke ụlọ ọrụ Bensen
Bensen ụlọ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ na -esi ọnwụ na mbụ, ndị ahịa maka ebumnuche, gbado anya na mmepe nke mkpụmkpụ ụgbọ ala. Bensen anọwo n'ime ahụmịhe mmepụta afọ iri gara aga, ma nwee ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, maka ndị ahịa ọ bụla iji wuo ihe ịchọ mma n'ime ụgbọ ala nke ha. N'otu oge ahụ, anyị na -anabata teknụzụ kachasị elu, yana akụrụngwa kacha mma maka akpụkpọ anụ microfiber akpaaka. Bensen na-ewepụta ngwaahịa kacha mma, ma na-atụ anya ịmalite imekọ ihe ogologo oge na ikike mba ofesi ọ bụla. Ọ bụ nhọrọ gị na -akwa ụta ịhọrọ Bensen.
● Uru nke ụlọ ọrụ Bensen:
1. Bensen nwere ụlọ ọrụ nke ya ma nwee ike nye ọrụ ahaziri iche.
2. Anyị nwere nnukwu ngwaahịa akpụkpọ anụ dị njikere maka mbupu ozugbo.
3. 40+ agba dị iche iche nke akpụkpọ anụ microfiber maka nhọrọ gị
4. Ngwaahịa Bensen dị n'ụdị dị iche iche, gụnyere ụkpụrụ BMW, usoro pinhole, wdg. A na -enwekwa nhazi dị ka ihe ị chọrọ si dị.
5. Enwere ike ịnye nlele n'efu ka ị lelee ịdị mma.
6. Ndị otu ọkachamara iji dozie nsogbu gị gbasara ime ụgbọ ala.
● Uru nke Bensngwaahịa:
Uru nke akpụkpọ anụ microfiber:
Akpụkpọ anụ microfiber akpaakanwere agba dị iche iche, anyị nwere agba 40+ maka ndị ahịa ịhọrọ site. Ngwa ngwa ngwa agba. N'iji usoro ISO 105-X12, ịdị nkọ na-adị ngwa ngwa nke akpụkpọ anụ microfiber Bensen maka ụgbọ ala nwere ike iru 5. Ọ nwekwara ike iguzogide ike dọkatụrụ adọka nke 80N. Bensenakpụkpọ anụ microfiber ọ fọrọ nke nta ka iku ume dị ka ezigbo akpụkpọ anụ.
Nguzogide siri ike siri ike, dị mfe ihicha. Enwere ike wepu nsị kọfị na ihe ọ juiceụ withụ na akwa nhicha mmiri; mma na -eguzogide. Iji kwa ụbọchị enweghị ihe ọ bụla na -eyi, ọbụlagodi iji esemokwu nke ihe igwe, mana nwekwara ike idobe ọcha, enweghị akara ọ bụla doro anya nke eyi. Bensenakpaaka suede akpụkpọ anụna -eji microfiber suede akpụkpọ anụ, ihe owuwu pụrụ iche iji hụ na ikuku ikuku ya dị mma; ahụmịhe ịnya ụgbọ ala ka mma. Ọ nwere ike igbochi ahụ na oche ọkwọ ụgbọ ala ịkwọpụ mgbe ị na -anya ngwa ngwa. Agba juru eju karịa akpụkpọ anụ PU, a na -ahụkwa ihe anya ya na akpụkpọ anụ. N'ime ngwakọta agba ụfọdụ, mmetụta anya siri ike karịa akpụkpọ anụ PU.
Uru nke akwa ala ụgbọ ala:
1.The silk warara Ọdịdị, nwere ike dị irè akara nke ájá na unyi ute n'ime, adịghị na -elekọta kwa ụbọchị, kamakwa na -na ụgbọ ala dị ọcha;
2.High-quality ihe onwunwe, ndụ ọrụ nke ihe karịrị afọ ise;
3. Ụdị nke ọ bụla ga -atụ data tebụl ụkwụ, ahaziri onwe ya, ọ nweghị ihe egwu;
4.Matskwà ụgbọ ala anaghị emetụta nchekwa ịnya ụgbọ ala, a na -eji nha akwa akwa tụnyere ụgbọ ala ahụ n'ezie, akụkụ ndị dị mkpa, dị ka ipigide, a na -ahazi nha nha ka ọ dị mma, agaghị enwe obere mmetụta;
5.The agba bụ mbara, izute gị nhọrọ.
Uru nke setịpụrụ oche oche ụgbọ ala:
Akwa akwa oche oche ụgbọ ala ụlọ ọrụ Bensen na-eji eriri ahịhịa dị ọcha, dị mma maka anụ ahụ na ntụsara ahụ, nje nje na mgbochi, ọ na-eku ume na ọsụsọ dị mma, na-egbochi ọnụnọ, enweghị nkwa ọ bụla, ọ bụghị nkụda mmụọ, ọ bụghị mpịakọta, dị nro ma dịkwa larịị. Akpụkpọ ahụ dị ala na-eji nchekwa gburugburu ebe obibi 1.4 mm dị elu TPU otu akpụkpọ anụ ụfụfụ, nwere ike hụ na ihe mkpuchi oche dị nro dị nro, ihe na-eguzogide na-adịghị ada ada, akwa siri ike anaghị emebi emebi. Nhazi oghere akpụkpọ anụ nke ala na -eme ka ume akpụkpọ anụ ahụ dịkwuo elu. Na iji teknụzụ ịkpa oke ọfụma (nke a na-ejikarị na uwe elu, okpu na ihe mkpuchi ndị ọzọ), mmezi ụlọ ọrụ nke usoro ịkpa ihe ọdịnala, 16358 stitch, na-akọwapụta onyinyo skyscraper obodo atọ zuru oke.Ihe mkpuchi oche oche nwere ike ibelata ike ọgwụgwụ mgbe ịkwọ ụgbọala, ọ bụrụ na ịchọrọ, biko kpọtụrụ anyị.